Ejikọtara ya na ọnọdụ dị ugbu a nke ụlọ ọrụ, anyị kwesịrị ime ya site na nkwụsị ma na-arụsi ọrụ ike
N’April 16, uwe Pinyang natara iwu nke mpempe 3000, nke emere nke ọma na 29th. “Ọnụ ọgụgụ nke iwu a pere ezigbo mpe, ọ chọkwara agba asaa. Ọ na-ewe awa iri na abụọ maka otu agba iji megharịa ya na ụbọchị atọ maka agba asaa. Ọ dịkwa mkpa iji wuchaa var ...
Enwere ike ịnabata iwu maka naanị akwa abụọ ma ọ bụ atọ N'ihi ntinye nke "ụlọ ọrụ rhinoceros" nke Alibaba, mgbanwe ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ na-emepụta uwe aghọwo isiokwu dị mkpa na ụlọ ọrụ ahụ ọzọ. N'ezie, ebe ọ bụ na ejiji nke mba mba uwe ...
Inweta mkpa nke ndị na-eto eto dị ka ntụzịaka nke nyocha ngwaahịa na mmepe iji jide ndị otu na-eto eto na-azụ ahịa
Ọktoba 6, 2020, elekere iri nke ụtụtụ. Na-ewere akwa dị ka elekwasị anya nke ngwaahịa ọhụrụ, gaa na ihe ọmụma dị mkpa na njirimara nke akwa. N'ehihie, ngalaba njikwa ahụ wepụtara ọdịnaya dị mkpa wee kpọkọta ndị ọrụ dị mkpa maka nkọwa akọwapụtara ihe ...
N'ọnwa Ọktọba 2020, e kpebiri ịhapụ ndị otu ya ka ha sonye na mmụta nke teknụzụ ọhụụ
N'ọnwa Ọktọba 2020, iji kwado echiche a na "ịtụkwasị ndị mmadụ" obi, anyị ga-enye ndị ahịa anyị ezigbo ọrụ. Kwe ka ndị ahịa nwekwuo nhọrọ ma kpebie ịhapụ ndị otu ha ka ha sonye na mmụta nke teknụzụ ọhụụ. Ha ga-ebido mmụta na October 6th, ya mere ...
Iji meziwanye njikwa njikwa, melite nka arụmọrụ, ma gbasaa echiche ọrụ, na Machị 15, 2020, a haziri ndị na-arụ ọrụ n'ihu iji duzie ọzụzụ izu na-esote. Isi ọdịnaya nke ọmụmụ a gụnyere akụkụ abụọ: ikike ọrụ ọrụ nke ...